I-Google Duplex: Ukukhuluma Irobhothi Ocingweni (Nokungaboni) | Ukuqeqeshwa kwengqondo
I-Google Duplex: ukukhuluma ocingweni neRobhothi (futhi ungakuqapheli)
Abaningi bethu, elalele le kholi (ngesiNgisi), ngeke baphawule lutho oluxakile: ngumuntu obhuka i-aphoyintimenti lapho elungisa izinwele. Inkinga ukuthi into ethile eyinqaba kufanele ibe lapho, ngoba silalela eyodwa ingxoxo yesikhathi sangempela phakathi komuntu nomuntu ongumshini.
Isambulo simangaze wonke umuntu ngoba, ngokungafani nezinye izindawo (njengokuqashelwa kwabantu), ama-algorithms obuhlakani bokufakelwa ahlala ethola imingcele emikhulu ekuqondeni nasekukhiqizeni ulimi olukhulunywa ngomlomo, kangangoba le ndawo ihlelwe njengenselelo yangempela 'ukuhlakanipha okungekhona okwangempela. Ngemuva kwakho konke, kusithatha sonke imizuzwana embalwa ukubona ucingo lwangempela kusuka kolwenziwe ngezwi elirekhodiwe. Noma okungenani, kuze kube manje.
Embhalweni wokwethula we I-Google Duplex (leli igama lobuchwepheshe) esizoliphawula izinselelo eziningi ababhekeli phambili abaye babhekana nazo (ngokusobala, ukuzixazulula) nokuthi thina esisebenza emkhakheni wokuxhumana ngamazwi sazi kahle:
Ngokungafani nokusesha kwe-Google, ukubhukelwa ngezwi kungaphezulu kakhulu okungaqondile: iqukethe ukungabaza, amagama aphindaphindwe kaningana, ukuzilungisa ngokwakho. Omunye wemisebenzi yomshini ngakho-ke "ukuhlanza" isignali nokukhipha okuqukethwe kolwazi
Abantu bavame ukukhuluma ngokushesha futhi uma bekhona ocingweni, bangaba nomsindo ongemuva. Ngakho-ke omunye umsebenzi womshini khomba bese uhlukanisa umyalezo
Okuqukethwe kungaba kuyadida: njengasesibonelweni esinikezwe yikhasi le-Google, ngesiNgisi u- "Ok for 4" angasho ukuthi "Ok for 4: oo" noma "Ok for 4 people". Umsebenzi womshini ngakho-ke ukukhomba nokuhlukanisa lezi zimo ezingenzeka
Zazi izici pragmatic: kwesinye isikhathi umshini kufanele uphendule ngezenzo ezicelweni ezicacile, isibonelo "Ungalinda umzuzu?", "Ungaphinda?", "Ungayisho incwadi ngohlamvu?"
Kuyamangaza iqiniso lokuthi, ukubukeka kwendalo, uhlelo kumele lube olunganembile ngokwengeziwe: "intombazane" eyenza ukuqokwa isebenzisa izifinyezo, ukungabaza nokulungiswa kabusha ngenhloso eyodwa yokubukeka kwemvelo ngokwengeziwe.
Ngenhlanhla yethu, I-Duplex kuzofanele iziveze njengerobhothi ngaphambi kokuqala ingxoxo yocingo nathi.
Iqiniso liwukuthi ukutholwa okwenziwe ukunqoba bonke ubunzima obuchazwe ngenhla kungaba nomthelela omkhulu amamodeli wokuqonda nokukhiqiza izilimi.
I-Google Duplex: ukukhuluma ocingweni neRobhothi (futhi ungakuqapheli)2018-05-142020-02-22http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngUkuqeqeshwa kwengqondohttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2018/05/hand-3308188_960_720.jpg200px200px
Ukuqeqeshwa ngekhompyutha kwememori yokusebenza: izinzuzo ze-aphasiaInkumbulo yokusebenza, Neuropsychology, ubuchwepheshe obusha